Jarmalka & Argentina oo finalka dheelaya – LaacibOnline
Jarmalka & Argentina oo finalka dheelaya
13 Luulyo 2014
Xigashada Sawirka, AP
Thomas Mueller oo u dabaaldagaya goolkii ugu horeeyey oo uu ka dhaliyey Portugal
Indhaha caalamka ayaa waxa ay ku jeedaan garoonka kubadda cagta ee Maracana ee magaalada Rio De janeiro, halkaasi oo caawa ciyaarta finalka koobka adduunka ay ku kulmi doonaan xulalka qaranka Jarmalka iyo Argentina.
Kaddib muddo bil ah oo tartanka kubadda cagta adduunka uu marba heer ahaa, oo 32-dii koox ee ka kala yimid masaafooyin kala fog, ee ku dheelay garoomo ku yaal 12 magaalo oo ay kala duwan tahay cimiladooda, ayaa haatan waxaa isugu soo haray laba koox oo kaliya oo midkood uu koobkan la hoyan doono.
Waa markii saddexaad oo ay labadan koox ay final isugu yimaadaan koobka adduunka, waxa ay horay u kulmeen 1986-dii iyo 1990-kii, oo xulba uu mar ka qaaday koobka midka kale.
Jarmalka ayaa u muuqdo in uu ka rajo badan yahay kooxda Argentina, kaddib markii uu 7-1 uga adkaaday xulka Brazil ee martigalinaya ciyaaraha, ciyaartii nus dhamaadka ee koobkan.
Hasayeeshee waxa ay u baahan yihiin in ay sii wadaan ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen qeybihii dambe ee tartanka, oo ay iska ilaaliyaan ciyaar la mid ah tii ay kala hortageen xulka Aljeeriya, oo ay dirqi uga badiyeen.
Argentina ayaanan ilaa iyo hadda arag ciyaar adag, oo waxa ay ka soo gudubtay group ay kooxihiisa jilicsan yihiin, sidoo kale waxa ay ciyaar aan la jeclaysan kaga soo baxeen kooxda Switzerland, halka ay gool ku laad kaga badiyeen xulka Netherlands.
Labada kooxba waxa ay fursad weyn u haystaan in ay koobkan ku guulaystaan.
Jarmalka ayaa suuragal ah inuu noqdo dalkii ugu horreeyay ee Yurub ka soo jeeda oo koobka adduunka ku qaada gayiga Laatiin Ameerika, kooxduna waxa ay tahay kooxda ugu gool dhalinta badan koobka adduunka.
Argentina ayaa markii ugu dambeysay ee ay ku guulaysto koobka adduunka waxa ay aheyd 1986-kii, markaasi oo 3-2 uga badisay kooxdii Jarmalka, hasayeeshee ma aanay soo gaarin finalka koobka adduunka tan iyo 1990-kii.
Guul ay ku gaarto carriga Brazil-na waa mid muhiim u ah.
Argentina ayaa inta uu socday tartantankan waxa ay ku tiirsaneyd laacibkooda Lionel Messi, oo goolasha uu dhaliyay ayaa kooxda u sahashay inay ka soo gudbaan wareega group-yada, haddii uu koobkan ku guulaystana waxa ay fursad u siin doontaa in uu la sinmo laacibka laga haray ee dalkiisa ee Maradona.
Balse kooxda Jarmalka ayaa ku tashanaysa ciyaaryahan Miroslav Klose, oo ah ciyaaryahan rikoor cusub u dhigay gool dhalinta koobka adduunka kaddib markii uu gool ka dhaliyay kooxdka Brazil, sidoo kale waxa ay ku tashanayaan ciyaaryahanka kale ee Thomas Muller oo gool dhalinta iyo kabaha dahabka kula tartamaya ciyaaryahanka Colombia ee James Rodriguez.
Ku dhawaad todobaatan iyo shan kun oo qof ayaa ciyaarta ka daawan doona garoonka Maracana, waxaana wax xiisa leh noqon doona kooxda ay gacan siin doonaan taageerayaasha kooxda Brazil ee niyad jabsan.
← Sabti, Nov 21, 2020-Dooxada degmada Xuddun oo dab baabiiyey
Sabti, Nov 21, 2020-Murashixiinta madaxtinimada oo ku eedeeyay dowladda inay diiday in la abuuro jawi doorasho la isku halayn karo →
Xulka Albania badin ayay baasabooro dublamaasi ku heleen
Hargeisa oo laga dhisay garoon caws ah
Jubaland President Ahmed Mohamed Islam (Ahmed Madobe) addressed the political situation in the country, particularly on elections and security. He